सुत्नु अगि अनुहारमा काचो आलु लगाउनाले मिल्नेछ साेच्दै- नसोचेका फाइदाहरु ! पढेर सेयर गर्नुहाेला
सोमवार, असार २१, २०७८ ७:३७
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। आजको वर्तमान समयमा, प्रत्येक व्यक्ति सबैभन्दा सुन्दर देख्न चाहन्छन् तर बढ्दो वायु प्रदूषण र व्यक्तिको तनावको कारण, छालाको प्राकृतिक चमक हराउँदै जान्छ, जसको कारण अनुहारको चाउरीपन दिनदिनै बढ्दै जाने गर्दछ ।
अनुहारमा कुनै पनि चमक देखा नपर्दा, मानिसहरूले बजारमा फेला परेको रा-सायनिक उत्पादनहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् जसले गोरोपन बढाउँछ तर क्रीम प्रयोग गर्न रोक्ने बित्तिकै त्यसको साइड इफेक्ट देखा परिहाल्छ, त्यसैले रा-सायनिक बढी मुल्य पर्ने उत्पादनहरूको सट्टा तपाईले घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, जसले तपाईंको छालालाई नोक्सान नगरी सुधार गर्दछ, आउनुहोस् जानौँ त्यस्ता केही उपायहरु:-
तपाईलाई जुन चिजको बारेमा बताउने कुरा गर्दै थियौँ त्यो हो आलु । आलु एक यस्तो चिज हो । जसलाई हामी सब्जी बनाएर उपयोगमा लिने पनि गर्दछौँ तर यसले खानबाहेक अन्य कुराहरु जस्तै त्वचालाई सुन्दर बनाउनमा पनि यसले काम गर्दछ । आउनुहोस् जानौँ काँचो आलुलाई त्वचाको लागी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त ?
यदि तपाई रातको सुत्ने समयमा आलुको टुक्रालाई का-टेर आफ्नो अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसरी लगाउनाले तपाईको अनुहारमा भएको कालो धा-ग धब्बा र पिम्पल्स हटेर जानेछ र अनुहारको रगं पनि बदलिनेछ । यदि तपाईको अनुहार कालो कालो छ भने पनि यो ढिलो ढिलो गरेर भएपनि हटेर जानेछ ।
यदि तपाई आफ्नो अनुहारको कालोपन हटाउन चाहानुहुन्छ भने पनि तपाई आलुको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसको लागी तपाईले रातमा काँचो आलुलाई मिक्सरमा पिस्नुहोस् र यसमा १ चम्चा काँचो दुध मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । र यस पेस्टलाई रातको समयमा अनुहारमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् र बिहान उठेर पानीले मुख धुनुहोस् । यस्तो गर्नाले तपाईको अनुहार चम्किनेछ ।
यदि तपाई आलुको पेस्टमा बेसन मिलाउनुभयो भने पनि यसले तपाईको त्वचालाई लाभ पुर्याउँदछ । यसले हाम्रो त्वचा अधिक मुलायम र सुन्दर बनाउँछ । यो एक प्राकृतिक घरेलु उपचार हो यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन ।
खुट्टा तात्दैनन् चिसो मौसममा ? यी पाँच रोगको संकेत हुनसक्छन्
सविना गौतम - सोमवार, मंसिर २०, २०७८ १:५३
चिसो मौसम आइसकेको छ । यो मौसममा न्यायो कपडाले शरीर ढाक्दा पनि केही मानिसहरु सधैं चिसो महसुुस गरिरहन्छन् ।
हेलिकोप्टरबाट गर्भवती महिलाको उद्धार
सविना गौतम - आइतवार, मंसिर १९, २०७८ ४:३३
खोटाङमा प्रसूति व्यथाका कारण स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका गर्भवतीलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गतको हेलिकोप्टर सेवामार्फत उद्धार गरिएको छ ।
राति निन्द्रामा बर`बरराउदै हिड्नुकाे यस्ताे रहेछ कारण
सविना गौतम - शनिबार, मंसिर १८, २०७८ ८:३४
राति निन्द्रामा बर`बरराउदै हिड्नुकाे यस्ताे रहेछ कारण ! प्राय मानिसहरुले दिउसको कुरा राति सपनामा देख्ने गरेका हुन्छन् ।